Jowhar.com - Somali news Leader - News: Maleeshiyooyin hubeysan oo dad ku dilay deegaano ka tirsan Gobolka Mudug
December 13 2013 17:14:45
Maleeshiyooyin hubeysan oo dad ku dilay deegaano ka tirsan Gobolka Mudug
Xiisado u dhaxeeya labo maleeshiyo beeleed ayaa ka taagan deegaano dhaca waqooyi bari Gobolka Mudug, iyadoo maleeshiyooyin hubeysan oo ka soo jeeda Puntland ay dad ku laayeen deegaan ka tirsan Mudug.
Sida ay sheegayaan wararka xiisado ku saleysan aanooyin qabiil ayaa ka dhex taagan dad xoolo dhaqato ah oo ka soo kala jeeda Maamulada Puntland iyo Galmudug.
Gudoomiyaha Gobolka Mudug ee Maamulka Galmudug Aweys Cali ayaa ku eedeeyay maleeshiyooyin ku hubeysan gaadiid dagaal ay weerareen dad deegaanka ah, isla markaana ay dileen ilaa saddex ruux oo labo ay walaalo ahaayeen.
Waxaa uu ugu baaqay maamulka Puntland in arrintan si deg deg ah wax uga qabtaan, isla markaana xiisada ay soo fara geliyaan, isagoo wax laga xumaado ku tilmaamay inay soo laabtaan colaadan u dhaxeya labada beelood.
Deegaanada waqooyi bari Mudug ayaa waxaa dhowr jeer oo hore dib ugu soo laabtay aanooyinka qabiil oo u dhaxeeyay dad xoolo dhaqato ahaa.
0 Comments · 1552 Reads
jowhar.com3,196,415 unique visits